ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: ကျောင်းဆရာ ကျွန်တော် (၁)
နုိုင်ငံခြားသားအများစုက အဲဒီ ၀စ္စပေါက်ပါတာနဲ့ မပါတာ သိပ်မကွဲဘူး။ သူတုို့ နားထဲမှာ ကြားနေတာလဲ ၀စ္စပေါက်ပါတာနဲ့မပါတာ အသံအတူတူဘဲတဲ့။ ပြောလေ့ပစေ အဲဒီလုို အသံမျိုးနဲ့ အားရပါးရး)
ကြိုးစားထား ဆရာဟန်ပြောသလိုဘဲ ..ဆရာလုပ်ရတာလောက်
ကောင်းတာ မရှိဘူး...ကျမဆို ဆရာလုပ်ချင်တာအရမ်းဘဲ
ကိုယ်ကဘဲ အသုံးမကျလို့လား မသိပါဘူး..
ဆက်ပါဦး ဆရာပွား အဲ ဆရာမျိုးရေ...မြန်မာဘာသာကို နိုင်ငံခြားသားတွေ သင်တော့ ကြုံတွေ့ ရတာတွေက စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းသား...
ထိုင်းတွေကိုမြန်မာစာသင်ပေးနေတယ်ဆိုတော့ နန်းတို့ကိုလဲထိုင်းစာ/ စကား သင်ပေးပါလားကိုမျိုး။
ဘာသာစကား သင်ရတာလောက် အတွေ့အကြုံတွေ အများကြီးရတာ၊ ကြိုတင်မှန်းထားလို့မရတဲ့ အဖြစ်တွေ ကြုံရတာမျိုး မရှိဘူး..၊ ဘာသာစကားသင်တာက စာသင်ကြားခြင်း တွေထဲမှာ အရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတဲ့ သင်ကြားမှုပါပဲ...၊ ဇတ်သိမ်းပိုင်း ဆက်ပါဦး ညီရေ..။
အခုထဲက ဘွတ်ကင်လုပ်ထားမယ် မောင်မျိုး မြန်မာပြည် ဘယ်တော့ပြန်လာမလဲ? ထိုင်းစာသင်ချင်လို့ ... :P
ဆရာမျိုး ... စခေါ်ပြီနော် ညင်းလို့ရတော့ဘူး ... :)
ကောင်းတဲ့အလုပ်ပါ မောင်မျိုးရေ.. အားပေးတယ်။
တီတင့်ရဲ့သားနှစ်ယောက်ကို ကိုယ်တိုင်စာမသင်ခဲ့ဘူး။ စိတ်မရှည်လို့ ဟာဟ။
BPP Challenge !!!!
သူကြီး... မပြင်ပေးပဲ ပေးပြောထားရင် သူတို့တကယ်သုံးတဲ့အခါကျတော့ ပြသနာတက်မှာပေါ့ဗျး)
ပစ်ပစ်.. ကျနော်လည်း ဒါ ပထမဆုံးပဲ လုပ်ဖူးတာ အရင်ကဆိုကြောက်နေတာ ။
ဆန်းထွန်း...ဟုတ်ကဲ့ ရေးမယ်လေ အရှိန်က ယူရင်း ပြန်ပြန်ကျသွားတာ
နန်းရွှေမှုံ.... ဟုတ် ဖေ့ဘွတ်က ပေ့စ်တစ်ခုမှာတော့ ကျနော် ထိုင်းစာတွေတင်ပေးနေတယ်ဗျ .
ကိုညီ.. ဟုတ်တယ် တန်ပြန်မေးခွန်းတွေ တစ်ချို့ဆို လန့်စရာ ချက်ချင်းစဉ်းစားလို့မထွက်လို့လေ ညီ့ရွေးချယ်မှုအတွက် ဒီတစ်ခါတော့ ပျော်တယ် အစ်ကို ။
တီတင့်... ဟုတ် သင်ပေးမယ် ဆရာလုပ်ရတာပျော်စရား)
ဆရာအလုပ်က အရမ်းငြိမ်းချမ်းပါတယ် မောင်မျိုးရေ...
ဒီအလုပ်ကလေးနဲ့ အမြဲအဆင်ပြေဖြစ်နေပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်...
တချို့ စကားလုံးလေးတွေ ရှင်းပြရတာခက်ရင် slides လေးနဲ့ ပုံလေးတွေနဲ့သင်ကြည့်ပါလားဟင်... ဟိုတလောက လုပ်တဲ့ ယဉ်ကျေးလိမ္မာသင်တန်းမှာ ပုံလေးတွေနဲ့ သင်တာ ကလေးတွေပိုမှတ်နိုင်တယ် သိလား...
အကို့ရဲ့ ဖေ့ဘုတ်ပေ့ခ်ျ လိပ်စာမသိရဘူးလားအကို။ နန်းသိချင်ပါတယ်။